အသက် ၂၀ မှာ တစ်ယောက်တည်းနေသင့်သည့် အကြောင်းရင်း ၈ ချက်… - CeleLove
အသက် ၂၀ မှာ တစ်ယောက်တည်းနေသင့်သည့် အကြောင်းရင်း ၈ ချက်…
June 11, 2019 Cele Love ဘ၀နှင့်အချစ် 0
ကျွန်မတို့ဟာ လူသားတွေ ဖြစ်သောကြောင့် ဘဝလက်တွဲဖော်ကို မက်မောတောင့်တ ကြပါတယ်။ အချိန်တွေကို အတူကုန်ဆုံးဖို့ အတွေးအမြင်တွေ ဖလှယ်ဖို့ ရုပ်ရှင် အတူကြည့်ဖို့ ဘဝကို အတူ စွန့်စားဖို့ တစ်စုံတစ်ယောက် ရှိနေပေးစေချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ထိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကတော့ ချစ်သူ ကောင်လေး သို့ ချစ်သူကောင်မလေးပေါ့ ။ ဒါကြောင့် အတော်များများက Relationship တစ်ခုက်ို လျင်လျင်မြန်မြန် တည်ဆောက်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက ကိုယ့်ရဲ့ အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်ကာလမှာ single အဖြစ်နေထိုင်ခြင်းဟာ ရေရှည်အတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ ။ ထို့အတွက် အကြောင်းရင်း ၈ ချက်ရှိပါတယ်နော် …. ။
အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်ကာလမှာ ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကောင်းကောင်း မသိနိုင်သေးပါဘူး။ အခုမှ လူတစ်ယောက်အဖြစ် စတင်ရုံကာလပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကာလမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရှာဖွေဖို့ အကောင်းဆုံး အချိန်ပါပဲ။ တခြားလူတယောက်၏ လွှမ်းမိုးမှု မပါပဲ ကိုယ် ဘယ်အရာကိုနှစ်သက်တတ်ပြီး ဘယ်အရာကို အမှန်တကယ် မုန်းတီးတတ်သလဲဆိုတာ ရှာဖွေပါ။ ဒီနည်းဖြင့် နောက်ပိုင်း Relationship အတွက် ပိုပြီး အဆင်သင့်ဖြစ်လာနိုင်ပြီး တခြားသူတွေဆီက ကိုယ် ဘာကိုရှာဖွေနေသလဲဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါက များစွာသော ဆိုးရွားတဲ့ Relationship တွေနဲ့ အသည်းကွဲမှုတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ် ….. ။
၂။ ပညာရေးကို အာရုံစိုက်ပါ။
အသက်၂၀ တာ ကာလဟာ ပညာရေးကို အာရုံစိုက်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါ။ ဒီအချိန်မှာဆိုရင် အလုပ်ခွင်၊ မိသားစုနဲ့ တခြားတာဝန်ယူစရာတွေ မပိသေးတဲ့ အချိန်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရာမှာ နှစ်မြှပ်နိုင်ရန် အချိန်များစွာရှိသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးမျိုးသောအရာတွေစမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ နောက်ပိုင်း အလုပ်အကိုင်တစ်ခုကို စတဲ့နေရာမှာ အကူအညီဖြစ်နိုင်တဲ့ တကယ့်လက်တွေ့ အတွေ့အကြုံတွေရော သီအိုရှီဗဟုသုတ ရော ရယူပါ။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားသော သင်တန်းတွေ အလုပ်သင်အလုပ်တွေ မာစတာအတန်းတွေ တက်ပါ။ နောက်ပိုင်း ဘဝမှာ အချိန်ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒီအခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံပါနဲ့နော် …. ။
၃။ အလုပ်အကိုင်တစ်ခု စတင်ပါ။
ကိုယ့်အလုပ်အကိုင်ကို အာရုံစိုက်ရမယ့် အချိန်ကောင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်နှစ်တွေ အတွင်းမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လိုပုံစံမြင်ချင်သလဲဆိုတာ အဖြေရှာပြီး ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင်သွားပါ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကျေးဇူးတင်နေပါလိမ့်မယ်နော် …. ။
၄။ကိုယ့်ကို ထောက်ပံပေးနိုင်သော သူများနဲ့ မိတ်ဖွဲ့ပါ။
ချစ်သူရည်းစားဆိုတာ ပြတ်သွားပြီးရင် သူစိမ်းတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်လိုတိုင်း အနားမှာ ရှိနေပေးတဲ့ ကိုယ့်ကို အထောက်ပံ့ကောင်းတွေပေးနေသော သူတွေနဲ့ ပေါင်းပါ။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကွန်ရက်ဟာလည်း ယနေ့ခေတ်ရဲ့ သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူများနိုင်သလောက် များများနဲ့ တွေ့ဆုံပါ။ သူတို့က အခွင့်အရေးကောင်းတွေ ယူဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ် …. ။
ကိုယ့်ရဲ့ အသွင်အပြင် ဖက်ရှင် ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ ဖိုမလက္ခဏာတို့ကို စမ်းသပ်ပါ။ Relationship မရှိတာနဲ့ပဲ သီလရှင်ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအစား ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှာဖွေ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်ဘယ်အရာကိုကြိုက်နှစ်သက်သလဲဆိုတာ ရှာကြည့်ပါ။ ဒါက Relationship တစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်ရာမှာ အလွန်ကူညီပါလိမ့်မယ်။ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည့် လက်တွဲဖော်ကို ရှာဖွေရာမှာလည်း ကြီးစွာ အထောက်အကူဖြစ်မှာပါ ….. ။
Relationship ထားခြင်းက ငွေအကုန်အကျလည်း များပါတယ်။ ညဘက်ထွက်ခြင်းများ ၊ ပီဇာ ၊ ဒိတ်၊ သောက်စရာ တွေ အားလုံးဟာ ငွေ ကုန်စေပြိး လူပါ ဝလာစေပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်ရဲ့ ၂၀ ဝန်းကျင်ကာလမှာ ငွေတွေအများကြီး မဖြုန်းချင်ပါဘူး။ ဒါဆို ဘာလို့များ ကိုယ့်အတွက် ပိုက်ဆံမစုပဲ တခြားသူအတွက် ကုန်ကျခံနေမှာလဲ။ ကိုယ့်မိသားစုဘဝ စတင်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်အတွက် သုံးဖြုန်းခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံက နည်းနေပြီး တခြားတစ်ယောက်အတွက်သာ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ပိုက်ဆံစုပါ …. ။
တခြားသူတွေရဲ့ ကိုယ့်အပေါ်အမြင်တွေကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားနေတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ကိုယ်သဘာဝတိုင်းနေဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲသွားပါလိမ့်မယ်။ single ဖြစ်နေခြင်းက တခြားသူတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုတွေးနေသလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာမလိုပဲ ကိုယ်ဖြစ်ချင်သလို လုပ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်အဝ ရှိနေပါတယ်။ ကပွဲတွေသွားပါ။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပါ။ နေရာတစ်နေရာကို ပြောင်းရွှေ့ပါ။ ဒါဟာ ကိုယ့်ဘဝပဲ။
ခရီးသွားခြင်းဟာ များစွာသော စီစဉ်မှုတွေလိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Relationship နဲ့ဆိုရင် နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ကြည့်ရတာကြောင့် ဒါဟာ နှစ်ဆ ပိုခက်ခဲသွားပါတယ်။ ကိုယ်က single ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူကိုမှ စိတ်မပူပဲ ကမ္ဘာ ရဲ့ ဘယ်ထောင့် မဆို ကိုယ်သွားချင်တဲ့ နေရာကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ ပဲရစ်ကို လေယာဉ်ပျံနဲ့ သွားမလား ။ စိတ်ပြောင်းသွားလို့ စပိန်ကိုသွားမလား ။ ဘယ်သူကမှ တားလို့ မရပါဘူး။ လမ်းမှာ မိတ်ဆွေအသစ်များစွာကိုလည်း တွေ့နိုင်သေးတယ် …. ။
အသကျ ၂၀ မှာ တဈယောကျတညျးနသေငျ့သညျ့ အကွောငျးရငျး ၈ ခကျြ…
ကြှနျမတို့ဟာ လူသားတှေ ဖွဈသောကွောငျ့ ဘဝလကျတှဲဖျောကို မကျမောတောငျ့တ ကွပါတယျ။ အခြိနျတှကေို အတူကုနျဆုံးဖို့ အတှေးအမွငျတှေ ဖလှယျဖို့ ရုပျရှငျ အတူကွညျ့ဖို့ ဘဝကို အတူ စှနျ့စားဖို့ တဈစုံတဈယောကျ ရှိနပေေးစခေငျြပါတယျ။ ပွီးတော့ ထိုတဈစုံတဈယောကျကတော့ ခဈြသူ ကောငျလေး သို့ ခဈြသူကောငျမလေးပေါ့ ။ ဒါကွောငျ့ အတျောမြားမြားက Relationship တဈခုကျို လငျြလငျြမွနျမွနျ တညျဆောကျကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျမ ဒီနရောမှာ ပွောခငျြတာက ကိုယျ့ရဲ့ အသကျ ၂၀ ဝနျးကငျြကာလမှာ single အဖွဈနထေိုငျခွငျးဟာ ရရှေညျအတှကျ အကောငျးဆုံးပါပဲ ။ ထို့အတှကျ အကွောငျးရငျး ၈ ခကျြရှိပါတယျနျော …. ။
အသကျ ၂၀ ဝနျးကငျြကာလမှာ ဘယျသူကမှ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ကောငျးကောငျး မသိနိုငျသေးပါဘူး။ အခုမှ လူတဈယောကျအဖွဈ စတငျရုံကာလပဲရှိပါသေးတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီကာလမှာ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ရှာဖှဖေို့ အကောငျးဆုံး အခြိနျပါပဲ။ တခွားလူတယောကျ၏ လှမျးမိုးမှု မပါပဲ ကိုယျ ဘယျအရာကိုနှဈသကျတတျပွီး ဘယျအရာကို အမှနျတကယျ မုနျးတီးတတျသလဲဆိုတာ ရှာဖှပေါ။ ဒီနညျးဖွငျ့ နောကျပိုငျး Relationship အတှကျ ပိုပွီး အဆငျသငျ့ဖွဈလာနိုငျပွီး တခွားသူတှဆေီက ကိုယျ ဘာကိုရှာဖှနေသေလဲဆိုတာ သိလာပါလိမျ့မယျ။ ဒါက မြားစှာသော ဆိုးရှားတဲ့ Relationship တှနေဲ့ အသညျးကှဲမှုတှကေို ရှောငျရှားနိုငျရနျ ကူညီပေးပါလိမျ့မယျ ….. ။
၂။ ပညာရေးကို အာရုံစိုကျပါ။
အသကျ၂၀ တာ ကာလဟာ ပညာရေးကို အာရုံစိုကျဖို့ အကောငျးဆုံးအခြိနျပါ။ ဒီအခြိနျမှာဆိုရငျ အလုပျခှငျ၊ မိသားစုနဲ့ တခွားတာဝနျယူစရာတှေ မပိသေးတဲ့ အခြိနျဖွဈတယျ။ ကိုယျစိတျဝငျစားတဲ့ အရာမှာ နှဈမွှပျနိုငျရနျ အခြိနျမြားစှာရှိသေးတယျ။ ဒါကွောငျ့ အမြိုးမြိုးသောအရာတှစေမျးသပျကွညျ့ပါ။ နောကျပိုငျး အလုပျအကိုငျတဈခုကို စတဲ့နရောမှာ အကူအညီဖွဈနိုငျတဲ့ တကယျ့လကျတှေ့ အတှအေ့ကွုံတှရေော သီအိုရှီဗဟုသုတ ရော ရယူပါ။ ကိုယျစိတျဝငျစားသော သငျတနျးတှေ အလုပျသငျအလုပျတှေ မာစတာအတနျးတှေ တကျပါ။ နောကျပိုငျး ဘဝမှာ အခြိနျရှိတော့မှာ မဟုတျပါဘူး ။ ဒီအခှငျ့အရေးကို လကျလှတျမခံပါနဲ့နျော …. ။
၃။ အလုပျအကိုငျတဈခု စတငျပါ။
ကိုယျ့အလုပျအကိုငျကို အာရုံစိုကျရမယျ့ အခြိနျကောငျးလညျး ဖွဈပါတယျ။ နောကျနှဈတှေ အတှငျးမှာ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ဘယျလိုပုံစံမွငျခငျြသလဲဆိုတာ အဖွရှောပွီး ပနျးတိုငျကို ရောကျအောငျသှားပါ။ ကုမ်ပဏီတဈခု၏ ခေါငျးဆောငျဖွဈတဲ့အခါမှ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ကြေးဇူးတငျနပေါလိမျ့မယျနျော …. ။
၄။ကိုယျ့ကို ထောကျပံပေးနိုငျသော သူမြားနဲ့ မိတျဖှဲ့ပါ။
ခဈြသူရညျးစားဆိုတာ ပွတျသှားပွီးရငျ သူစိမျးတှပေါ။ ဒါပမေဲ့ သူငယျခငျြးတှကေတော့ ဒီလိုမဟုတျပါဘူး ။ ဒါကွောငျ့ ဒီအခြိနျမှာ ကိုယျလိုတိုငျး အနားမှာ ရှိနပေေးတဲ့ ကိုယျ့ကို အထောကျပံ့ကောငျးတှပေေးနသေော သူတှနေဲ့ ပေါငျးပါ။ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးကှနျရကျဟာလညျး ယနခေ့တျေရဲ့ သော့ခကျြဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လူမြားနိုငျသလောကျ မြားမြားနဲ့ တှဆေုံ့ပါ။ သူတို့က အခှငျ့အရေးကောငျးတှေ ယူဆောငျပေးပါလိမျ့မယျ …. ။
ကိုယျ့ရဲ့ အသှငျအပွငျ ဖကျရှငျ ဝတျစားဆငျယငျပုံ ဖိုမလက်ခဏာတို့ကို စမျးသပျပါ။ Relationship မရှိတာနဲ့ပဲ သီလရှငျဖွဈလာမှာ မဟုတျပါဘူး။ ထိုအစား ကိုယျတတျနိုငျသလောကျ ကိုယျရဲ့ ခန်ဓာကိုယျ ကိုယျ့အကွောငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ရှာဖှေ စမျးသပျကွညျ့ပါ။ ကိုယျဘယျအရာကိုကွိုကျနှဈသကျသလဲဆိုတာ ရှာကွညျ့ပါ။ ဒါက Relationship တဈခုကို ဆုံးဖွတျရာမှာ အလှနျကူညီပါလိမျ့မယျ။ အကြိုးဖွဈထှနျးမညျ့ လကျတှဲဖျောကို ရှာဖှရောမှာလညျး ကွီးစှာ အထောကျအကူဖွဈမှာပါ ….. ။
Relationship ထားခွငျးက ငှအေကုနျအကလြညျး မြားပါတယျ။ ညဘကျထှကျခွငျးမြား ၊ ပီဇာ ၊ ဒိတျ၊ သောကျစရာ တှေ အားလုံးဟာ ငှေ ကုနျစပွေိး လူပါ ဝလာစပေါတယျ။ ဘယျသူကမှ ကိုယျ့ရဲ့ ၂၀ ဝနျးကငျြကာလမှာ ငှတှေအေမြားကွီး မဖွုနျးခငျြပါဘူး။ ဒါဆို ဘာလို့မြား ကိုယျ့အတှကျ ပိုကျဆံမစုပဲ တခွားသူအတှကျ ကုနျကခြံနမှောလဲ။ ကိုယျ့မိသားစုဘဝ စတငျတဲ့အခါမှာ ကိုယျ့အတှကျ သုံးဖွုနျးခဲ့တဲ့ ပိုကျဆံက နညျးနပွေီး တခွားတဈယောကျအတှကျသာ ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့အတှကျကိုယျ ပိုကျဆံစုပါ …. ။
တခွားသူတှရေဲ့ ကိုယျ့အပျေါအမွငျတှကေို ထညျ့သှငျး စဉျးစားနတေဲ့အခါ ကိုယျ့ရဲ့ ပငျကိုယျသဘာဝတိုငျးနဖေို့ဆိုတာ ခကျခဲသှားပါလိမျ့မယျ။ single ဖွဈနခွေငျးက တခွားသူတဈယောကျ ကိုယျ့ကို ဘယျလိုတှေးနသေလဲဆိုတာ စဉျးစားစရာမလိုပဲ ကိုယျဖွဈခငျြသလို လုပျပိုငျခှငျ့ အပွညျ့အဝ ရှိနပေါတယျ။ ကပှဲတှသှေားပါ။ ရုပျရှငျကွညျ့ပါ။ နရောတဈနရောကို ပွောငျးရှပေ့ါ။ ဒါဟာ ကိုယျ့ဘဝပဲ။
ခရီးသှားခွငျးဟာ မြားစှာသော စီစဉျမှုတှလေိုအပျပါတယျ။ ပွီးတော့ Relationship နဲ့ဆိုရငျ နှဈယောကျစလုံးရဲ့ လိုအပျခကျြတှကေို ကွညျ့ရတာကွောငျ့ ဒါဟာ နှဈဆ ပိုခကျခဲသှားပါတယျ။ ကိုယျက single ဆိုရငျတော့ ဘယျသူကိုမှ စိတျမပူပဲ ကမ်ဘာ ရဲ့ ဘယျထောငျ့ မဆို ကိုယျသှားခငျြတဲ့ နရောကိုသှားနိုငျပါတယျ။ ပဲရဈကို လယောဉျပြံနဲ့ သှားမလား ။ စိတျပွောငျးသှားလို့ စပိနျကိုသှားမလား ။ ဘယျသူကမှ တားလို့ မရပါဘူး။ လမျးမှာ မိတျဆှအေသဈမြားစှာကိုလညျး တှနေို့ငျသေးတယျ …. ။
ယောက်ျားလေး လိင်အင်္ဂါ အတိုအရှည်အား လက်ကိုကြည့်၍ မှန်းဆနိုင်